ကနျတီ ကှာရနျတငျးဝငျနရေပွီးနောကျ ခြဲလျဆီးစတားမြားကို ကာကှယျဆေး အတငျးထိုးခိုငျးလို့မရဟု တူခယျြဝနျခံ – Play Maker Sports Journal
တူခယျြက “ကိုဗဈကာကှယျဆေးမထိုးမှုကထိခိုကျနိုငျသလားဆိုတာ Yes လို့ပွောရတာလှယျပါတယျ။ဒါပမေယျ့တဈခြိနျတညျးမှာဘဲကြှနျတျောပွောတာမှနျကနျသလားဆိုတာ မေးခှနျးထုတျရပါမယျ။ကြှနျတျောကတော့မသခြောပါဘူး။ကိုယျ့အတှကျဘဲဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျပါတယျ။အခွားသူတှလေညျးကိုယျ့ဖာသာကိုယျဆုံးဖွတျရပါမယျ။ဒါကခကျခဲတဲ့မေးခှနျးပါ။ကာကှယျဆေးကကာကှယျပေးမယျ့အရာပါ။ကြှနျတေျာ့ကာကှယျဆေးထိုးထားတယျ။ဒါကကြှနျတေျာ့ဆုံးဖွတျခကျြပဲ။အခွားသူတှနေဲ့ပတျသကျပွီးမပွောခငျြဘူး။ပွောသငျ့တယျလို့လညျးမထငျဘူး”လို့ပွောကွားသှားပါတယျ။
ကန်တီ ကွာရန်တင်းဝင်နေရပြီးနောက် ချဲလ်ဆီးစတားများကို ကာကွယ်ဆေး အတင်းထိုးခိုင်းလို့မရဟု တူချယ်ဝန်ခံ
Chelsea’s French midfielder N’Golo Kante runs with the ball as socially distanced fans watch from the stands during the pre-season friendly football match between Brighton and Hove Albion and Chelsea at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on August 29, 2020. – The game isa‘pilot’ event whereasmall number of fans will be present onasocially-distanced basis. The aim is to get fans back into stadiums in the Premier League by October. (Photo by Glyn KIRK / AFP) (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)
တူချယ်က “ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးမှုကထိခိုက်နိုင်သလားဆိုတာ Yes လို့ပြောရတာလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲကျွန်တော်ပြောတာမှန်ကန်သလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့မသေချာပါဘူး။ကိုယ့်အတွက်ဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အခြားသူတွေလည်းကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ဒါကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပါ။ကာကွယ်ဆေးကကာကွယ်ပေးမယ့်အရာပါ။ကျွန်တော့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်။ဒါကကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။အခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောချင်ဘူး။ပြောသင့်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူး”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။